Smartling: Ọrụ Ntugharị, Njikọ Aka, na Usoro Akụrụngwa Software | Martech Zone
Smartling: Ọrụ Ntugharị, Njikọ Aka, na Usoro Akụrụngwa Software
Ọ bụrụ na ọ bụ n'okwu na-eme ka azụmahịa nwee, ọ bụ ntụgharị asụsụ na-akwado azụmahịa mba niile. Bọtịnụ, ụgbọ ibu azụmahịa, na akwụkwọ ịhụnanya. A ga-atụgharịrị weebụsaịtị, ozi ịntanetị, na ụdị n'asụsụ dị iche iche ka akara ngosi nwee ike ịga ụwa niile ma ruo ndị mmadụ ọhụrụ.
Nke a na-ewe ìgwè mmadụ ndị jiri nlezianya na-ejikwa ọwa nkesa ọ bụla maka ọdịnaya ọdịnaya; ọ na-akwụkwa ụgwọ maka ndị otu iji lebara asụsụ ọ bụla na-akwado anya. Tinye: Smartling, sistemụ njikwa ntụgharị asụsụ na onye na-enye ọrụ asụsụ na-enye ụdị ikike ike dị iche iche iji chọta ọdịnaya gafee ngwaọrụ yana nyiwe. Smartling's Enterprise Translation Cloud, usoro ntinye data na mpaghara, na-enye ndị ahịa ya ohere ị nweta nsụgharị nke kachasị elu na ọnụ ala dị ala.
Smartling bụ usoro ntụgharị ntụgharị nhọrọ maka ọtụtụ narị ụdị, gụnyere Hootsuite, InterContinental Hotels Group, Sprout Social, GoPro, Shopify, NextDoor, Slack, na SurveyMonkey.
Gịnị Na-eme Smartling Dị Iche?
Nhazi ihe omuma data - Ọ bụghị naanị Smartling na-enye ndị ahịa ezigbo data gbasara usoro ntụgharị asụsụ ha, mana ọ dịkwa amamịghe maka ịme mkpebi maka ha.
Automation - Ndị mmepe anaghị adị mana a ga-eme ntụgharị asụsụ ahụ. Smartling na - ejikọ na CMS, ndị na - edebe koodu, na ngwa ahịa akpaaka na - enweghị nsogbu iji belata ibu ọrụ nke ibi.
Anya anya - Ndi nsughari kwesiri ihu okwu anya ka ha weputa oru di elu. Na-enweghị ya, ahụmịhe onye ọrụ njedebe na-ata ahụhụ. Ntugharị ntụgharị Smartling na-enyere onye ntụgharị ọ bụla aka ịghọta ọrụ dị n'aka.
Ntughari Igwe Smartling (MT)
Ọ bụghị ọrụ ọ bụla chọrọ onye ntụgharị mmadụ. Abịa n’ịsụgharị okwu n’ọnụ ọgụgụ, ntụgharị asụsụ igwe bụ nhọrọ kachasị ọsọ ma dịkwa ọnụ ala. Smartling jikọtara ya na igwe MT kachasị ike na nke oge a, gụnyere Amazon Translate, Google Translate, Microsoft Translator, Watson Language Translator, na ndị ọzọ, iji nyere ndị ọrụ aka ịchọta ọrụ MT kwesịrị ekwesị maka mkpa ha ụfọdụ. Smartling na-etinyekwa ntụgharị asụsụ akwara ozi akwara iji gbanwee ntụgharị asụsụ ọdịnaya na ụdị ika ọ bụla pụrụ iche na ụda oge.
Ọrụ Asụsụ Smartling
Ọrụ Ntugharị Smartling na-asụgharị ihe karịrị nde okwu 318 kwa afọ site na abụọ na asụsụ 150. Companylọ ọrụ ahụ na-enyere aka ịmegharị njem ndị ahịa gafere 50 dị iche iche azụmahịa. Smartling na-eji usoro nlezianya nyocha, yana naanị 5% nke ndị na-enyocha ya na-eme ya, na-ahụ na ụlọ ọrụ ahụ na-enye naanị ndị ntụgharị okwu kachasị mma gburugburu ụwa. Ma ọ bụ, ọ bụrụ na ị nwere ndị nsụgharị nke gị, ịnwere ike ịgbakwunye ha na ikpo okwu Smartling yana n'ime usoro ntụgharị ntụgharị gị.
Site na iji ụzọ zuru ezu iji chekwaa ego, Ọrụ Asụsụ Smartling na-agabiga oke asọmpi nke okwu ọ bụla, na-enye mmemme ntụgharị emebere nke enweghị usoro opekata mpe, yana usoro ntụgharị asụsụ kachasị nwee ike ibelata nsụgharị ntụgharị ihe ruru 50 %.
Smartling enyere aka na kọmpụta (CAT)
Usoro ntụgharị asụsụ ahụ na-eme n'ime Smartling, yana ihe arụnyere n'ime Computer-Assistance Translation (CAT). Site na Smartling's CAT, a na-enye ndị ntụgharị okwu oge niile Visual Context, na-enyere ndị nsụgharị aka ịmatakwu ihe ọdịnaya ha na-atụgharị, na otu mkpụrụ okwu ha si dabaa n'ọnọdụ ahụ. Ozugbo ntụgharị asụsụ ahụ gwụchara, ndị ntụgharị nwere ike ịga ọsọ ọsọ gaa na ọrụ ọzọ maka ngbanye akpaaka.
Smartling na-arụkwa ọrụ iji mee ka ọrụ ndị ntụgharị mmadụ dị mfe dị ka o kwere mee, ekele dịrị:
Anya gburugburu - Ndị ntụgharị nwere ike ịhụchalụ ọrụ ha dị ndụ, n'ụdị ọ bụla
Real oge Translation Memory
Njikwa Version - Naanị ọdịnaya ọhụrụ etinyere na ntụgharị maka ntụgharị asụsụ, ebe atụgharịrị ọdịnaya ochie site na ebe nchekwa Smartling
Ngwongwo Ibe - Akụrụngwa maka ụda na ụkpụrụ nduzi
Nlekọta Ogo Nlekọta - Ezigbo oge ndenye ego na-enyere aka ịchekwa oge nyocha
Ụzọ mkpirisi igodo - Chekwa oge na ihe ọ bụla
Jikota eriri - Ikpokọta agba na naanị otu keystroke
Mgbanwe Tag Ijikwa - Na-eji igwe mmụta eme ihe iji tinye mkpado n'ụzọ ziri ezi
Akpaka Routing - Smartling na - eme ka ọdịnaya na - agagharị, na --arụkwa nsụgharị na - akpaghị aka ụzọ ọzọ
Site na ijikọ usoro na ngwaọrụ dị ugbu a - dịka ọmụmaatụ, na-ebugote ọdịnaya na CMS - Smartling na-enyere ndị ọrụ aka ịhazi usoro ahụ dum na ntụgharị asụsụ ahụ n'ezie. Smartling nwere ike ichikota na ihe ọ bụla n'elu ikpo okwu ma ọ bụ ngwaọrụ ọ bụla akara aka gị na-agbazi:
Njikwa Ahụmahụ Adobe
Ahịa Cloudforce Cloud
Onye ndu na ntụgharị igwe ojii, Smartling weghaara ọrụ ọ bụla metụtara usoro ntụgharị asụsụ, na-etinye ha n'ime ndị ahịa data na-eme ihe iji mee ka ihe ọhụrụ n'ime azụmaahịa ha. N'ihi Visual Context na ndepụta siri ike nke atụmatụ akpaaka, ndị ahịa na-achọpụta ntụgharị asụsụ bara uru nke kachasị mma, na obere oge.
Jiri Okwu Mee Mba
N'afọ a, Smartling gosipụtara mgbasa ozi ahịa ọhụrụ akpọrọ Move the World with Words. Nke a bidoro n’echiche na e nwere ndị nọ n’azụ ihe niile ụlọ ọrụ ahụ na-emere ndị ahịa: ndị ntụgharị. Ya mere, otu a were otu onye na-ese foto nke gawara njem zuru ụwa ọnụ idekọ ndụ na akụkọ nke ndị ntụgharị okwu Smartling iri na abụọ bi n’elu ụwa niile. Akụkọ ndị ahụ na-abanye na Move the World with Words na tebụl okpokoro kọfị dị ugbu a.
Ndị ụlọ ọrụ na-achọ uto na ihe ịga nke ọma zuru ụwa ọnụ na-aga n'ihu na-enwe nnukwu mmasị na onyinye anyị. Ọ bụghị naanị na ndị ahịa ọhụrụ anyị nwere isi nke mpako, mana oke ịrị elu dị na NPS pụtara dịka ọ na-egosi ndị ahịa anyị ugbu a nwere ahụmịhe Smartling kachasị mma. Ọ na-agwa anyị na anyị na-emezu nkwa anyị kwere ndị ahịa mgbe a bịara n'inye ahụmịhe ebe obibi mara mma na teknụzụ ntụgharị ọhụụ na ndị ntụgharị ndị ndị ahịa anyị maara ma bụrụ ndọtị nke otu ha. Anyị agaghị adị ma enweghị.
Smartling ngalaba-nchoputa na CEO, Jack Welde
Hazie ngosi ngosi Smartling
Tags: Njikwa Ahụmahụ Adobegfpikpo okwu zuru oke nke uwantughari mmaduibm watsonNsụgharị Asụsụntụgharị asụsụ igweotutu asụsụala ika ahụmahụasụsụ obodoasụsụ nkịtịnsụgharị nke okikesmarttranslationnjikọ ntụgharị asụsụikpo okwu ntụgharịndị nsụgharị
Redirect WordPress na nkụnye eji isi mee